RBNIR - 14/02/2020 06:38
Aza mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko hoy aho...
Jesosy Kristy dia efa nampianatra sy nampahafantatra tsara mba hahafahan'ny olona rehetra mamantatra sy miomana...
« Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. » (Matio 24:30)
« Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany* efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.[*Gr. rivotra] » (Matio 24:31)
Anjaran'ny tsi11 sisa na handray izy na tsia...
RBNIR - 14/02/2020 14:58
Fa I Jesosy izany tena mi-sous-estime ny olona, mi-insulter ny intelizansan'ny olona, dia tena naleony TSY nolazaina akoriny.
Mose rhajo o! ianao io izany izao any mampianatra ankizy T1 ny leson'ny olona eny amin'ny anjerimanontolo????
Sao dia mba tokony esorina amin'izay ary ilay licencenao any fa otraotran'ny efa.....
rhaj0 - 14/02/2020 15:44
Rahefa mampianatra na mitaiza ry RBNIR, dia rahefa liana ny mpianatra, dia amena fahalalana feno FOANA. Koa na tsy liana azany izy, dia efa atsipy ny tady an-tandroky ny omby.
Mi-insulter ny intelizansa ny mpianatra na ny ankizy io ataon'i Jesosy manageja infos io. Ataony fa toa azy, na toa izay eritreretiny ao ny ankizy, nefa ny ankizy anie manana capacitE sy potentialitE tsara sy goavana ary tsy ampoizina mihintsy ee..
Fa dia velabelaro foana ny maha-"ratsy" ny anareo ao ry RBNIR aa.. tsara fa tohizo
Ngo dia hifofofofo eo indray hoe, "manaratsy" indray HONO aho, nefa ny anareo ao no efa "ratsy".
RBNIR - 15/02/2020 21:07
Dia tena gaga ianao fa dia ENY izany hono araka io valiteny io no navalin'i MOSE RHAJO ilay fanontaniana ry namana isany....
sao dia heverinao fa terminal aloha ilay T1 resahiko e! nanao EPP moa ianao io sa tsia???
T1 kilasy voalohany eny amin'ny EPP io mantsy
rhaj0 - 15/02/2020 22:57
RBNIR sao dia heverinao fa terminal aloha ilay T1 resahiko e!
N'enay izao ohatra, mbola talohan'ny T1 akoriny dia efa natsipitsipy hoe, Pere noel sy Jesosy dia finoa(noampoana) daholo izany.
ianao RBNIR @ io nefa efa lehiahilehibe io, dia mbola ao foana ihany
RBNIR - 16/02/2020 14:14
Ny zaza ange izay atolotra azy voalohany hatrany no raisiny ho marina e!
Izay no nahatonga an'Andriamanitra nilaza hoe...
« Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin'izany. » (Ohabolana 22:6)
Fa io hoy aho manana adidy lehibe amin'ny zanany ireo ray aman-dreny, ny anareo moa izany nocondamnenareo ireo zaza tsy hahafantatra an'Andriamanitra...
Dia aza manome tsiny Azy rehefa mihatra ity teny ity...« ..... Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy; » (Eksodosy 20:5)
Ianao no nampididoza ho an'ny zanakao fa tsy Izy velively io ilay teny hoe maty ny nasesiky ny tanany...
rhaj0 - 16/02/2020 20:55
RBNIR « ..... Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy; » (Eksodosy 20:5)
Avelao hipapapapa feno halozana ao ny Eksodosinao ry RBNIR, ary dia hadalanao izay mino azy koa io fa tena tsisy mahakitika an'izan'iza eee..
Ary efa lazaina foana fa misy kronoloziany io ry RBNIR. Ka aboahy ny fahaizanao ry RBNIR: ilay Andtrmna 3 no 1 ve ohatra io romodromotra io?
RBNIR - 17/02/2020 02:47
Manazava tsara an'ilay izy aho fa maro no mihevitra fa tsy responsable amin'ny fahaverezan'ny tenany sy ny taranany izireo ary diso hevitra hoe ilay Andriamanitra no loza be,
Tsy loza mihitsy Izy fa averimberina foana fa hoe Izy fa efa mametraka safidy malalaka be : na ianao hino Azy na ianao tsy hino ka hampianatra ny zanakao tsy hino ihany koa...
Dia araka ny safidinao ihany koa ny valiny....raha tsy niasa ho an'Andriamanitra ianao dia mazava loatra handray vokatra avy amin'izany...
Ny atao hoe miasa ho an'Andriamanitra mantsy dia ny olona izay mino izay nirahany...
« Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa Izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase. » (Jaona 6:27)
« Dia hoy ireo taminy: Inona no hataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? » (Jaona 6:28)
« Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny. » (Jaona 6:29)
Andriamanitra 3 izay 1
Be fampindram-po : raha mibebaka dia mamela Izy...Jak.5:11
Maharipo : tsy maika hamaly heloka fa manome fotoana malalaka hieritreretana..Nom.14:18 Mpitoriteny.8:11
Saingy nametraka foana ihany Izy hoe...
rhaj0 - 17/02/2020 13:52
Esy e ry Ratsimpontsinpona Betsindrontsindroka RBNIR... ka tsimponina Exodos, ka tsindrohana Jaona...
Efa amena sopapa hoe kronolizia kronolozia, fa hhheeee... mitsotsotsotso ihany I Betsindrontsindroka RBNIR manohy manala baraka ny Kristianisma. Ataon-dRBNIR fa eny @ alitara foana ho'a izy eto, ka na miteniteny foana mampiady resaka tsisy ifandraisany azany I RBNIR, dia mety foana HONO io.
ny Andrmntry ny Exodosy anie ry RBNIR ka Andrmntry ny tany @ 1500 taona talohan'i Jesosy, izany hoeee.... eritrereto ihany alohan'ny hitsindrohana fa, mety ilay Andrmntr'i Abrahama, ka ilay @ ilan'i Allah VE, sa iilay @ ilan'i YHVH sy ny Jiosy orthodox VE, sa ilay lasa 3 no 1 ao @ Baiboly Kristiana io???...
Mba ampiasao @ izay ilay coco ry RBNIR fa tsy dia manao io lehilahilehibe manao dridra-gilo tsianjery boka eto foana aaa... marina mouh houhou
RBNIR - 17/02/2020 14:36
Izao no notenenin'i Jesosy...
Izany hoe nisy nanome an'i Jesosy ilay fampianarana fa tsy hoe an'i Jesosy akory...
Iza no nanome an'io fampianarana io???
« Ary na dia mitsara aza Aho, dia marina ny fitsarako, satria tsy irery Aho, fa Izaho sy ny Ray Izay naniraka Ahy. » (Jaona 8:16)
Tsy Iza fa ilay antsoina hoe Ray Izay naniraka Azy....
Iza ilay Ray????
Tsy iza fa Jehovah Andriamanitra ilay Andriamanitry ny Israely ihany...
Ny antony nanirahana an'i Jesosy mantsy dia ny hanogotra izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ...
Ka izay ilay izy e, Ilay Andriamanitra teo aloha ihany no nampianarin'i Jesosy ho tompoina fa ny fanekena no novaina ho vaovao...
Jesosy ange hoy aho nampianatra tao amin'ny synagoga ary talanjona izay nihaino ny fampianarany e!
« Ary nony tonga tany amin'ny taniny Izy, dia nampianatra ny olona tao amin'ny synagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Avy taiza re no nahazoan'ilehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? » (Matio 13:54)
Ka i Jehovah Andriamanitra ihany no nampianariny tany fa tsy hafa akory...
gasy1zay - 17/02/2020 15:17
Indraindray RBNIR ohatrany mba nandroso t@ fahalalana ny soratra masina, indraindray mbola hita hoe mifangaro ny fandraisany azy.
Voalohany aloha raha tsy hainao ny tena antony ny nahatongavan'i Jesoa teto an-tany dia tsy misy mahasamihafa anao @ tsy mino, Jesoa kristy dia mesia, mpamonjy fa tsy hoe hanongotra ny tsy nambolen'ny ray fotsiny ( fahotana) ,
Ny nahatongavan'i Jesoa teto an-tany dia ny ho faty ho anao mba tsy handray ny valin'ny fahotanao ianao rehefa tonga ny fitsarana, ny nahatongavan'i Jesoa dia ny hitondra ny fahotanao teo @ hazo fijaliana mba tsy hisy ota ianao rehefa miseho eo anatrehan'ny Ray, ny nahatongavan'i Jesoa dia nandatsaka ny rany hanadio anao @ fahotanao mba hahazoanao fahamarinana ka ho tonga zanak'Andriamanitra ianao rrhefa tafaray aminy.
Tadidio ilay zanaka adala, raha niverina tao @ rainy izy dia tsy lasa mpanompo na dia izay aza no nangatahiny fa niverina zanaka. Tsy mpanompo ianao raha efa terabaovao fa lasa zanaka, tadidio ny tenin'i Jesoa hoe ny mpanompo tsy afaka mitoetra mandrakariva ao antranon'ny Ray fa ny zanaka no afaka.
rhaj0 - 17/02/2020 15:30
MIla misoka-tsaina mihintsy aloha ianao ry RBNIR, dia mba mihaino ny (fi)hevitry ny Mpino hafa rahalahy sy rahavavinao ao @ Andmntrao ao izao.
TSY (fi)hevitro io, na (fi)hevitr'Atheist, fa manondro ny (fi)hevitrareo Mpino ilay Tantara tao moyen-orient tao fotsiny aho io.
Ny Andrmntra 3 no 1 an'ny Kristiana, dia TSY eken'ny Jiosy sy Moslimo, nefa anie, dia Andtrmna IRAY ihany no nivavahan'ny Jiosy, Kristiana sy Moslimo, dia ilay Andmtnr'i Abrahama.
Ndana ange gogoleho mihintsy aloha ny tsirairay @ ireo, dia hadihadio, ampiasao ilay coco namena anao, avadibadiho ny saina sy ny lela alohan'ny hanampianao RBNIR ny fitenitenenam-poana eto ee...
RAha misy TSy takatrao ry RBNIr ny iray @ ireo, dia mba manontania, na anontanio @ HRNRN ao, fa tsy dia ity mitsotsotsotso sy mifofofofo ity foana no atao eto ee..
Manala baraka ny Kristianisma foana fotsiny ianao ry RBNIR. Isaka ny vao manoratra ianao dia tena hoe, ntss.. miala any indray Ratsimpontsimpona Betsindrotsindroka fa manala baraka ny namany eto... tsy ny votoatin'ny resany ihany no nandra beuh fa ny fototry ny fiheviny sy fisainany mihitnsy. Dia efa previzibla be indray izao fa andeha nikonetaka indray I RBNIR, dia hoe, enjehina ee... katsaka voanjobory eee... ary efa izay mihintsy no voasoratra ee...
(nefa tsisy voanjobory akoriny tao moyen-orient tao)
RBNIR - 17/02/2020 15:55
Ireo ny teny manamarina ny zavatra nolazaiko ireo mpanara-dia an'i Jesosy dia nampianariny hanompo an'i Jehovah (Andriamanitry ny Jiosy)
Izay no anton'ny baiboly (= testameta taloha + testameta vaovao tsy azo sarahina amin'ny kristiana)
Misy ny fanekena vaovao : ireny no nampianarin'i Jesosy (nongotana avokoa izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra tamin'ny fanompoana teo aloha rehetra...
Izay rehetra nambolen'i Jehovah ihany sisa navela sy notohizana....« Ary Izy namaly ka nanao hoe: Ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny Raiko Izay any an-danitra dia hongotana. » (Matio 15:13)
Inona no sarotra amin'izany??? ianao ange no tsy mahafantatra fa ny kristiana efa mahafantatra tsara an'izany daholo e!
RBNIR - 17/02/2020 15:57
NB : ilay 3 izay 1 aleo atao lohahevitra hafa mihitsy...satria hitako fa izay no mahadiso hevitra anao....Mat.22:29
Raha vao maso atheist no hamakinao ny baiboly dia azo antoka 100% fa tsy maintsy ho diso hevitra ianao...
Farafaharatsiny mijanona eo anelanelany raha te hahita ny marina....
rhaj0 - 17/02/2020 16:08
eny ho'a ee... RBNIR irery no mahay azy HONO.. nefa ity aza tsy takatr'i RBNIR.
Fa dia averimberikoko eto ihany, hanindrontsindromana an-dRBNIR, ngo dia mba midona ihany farany
RBNIR - 17/02/2020 16:28
Ny jiosy normal satria nandà an'i Kristy noho izany nandà koa ny FM satria i Kristy no voafidy hanao batisa amin'ny FM...« Izaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina. » (Marka 1:8)
dia lojika be mijanona ho Andriamanitra tokana ny Ray = Jehovah
Ny moslimo efa nandà ilay tena Andriamanitra ka nanova ny Anarany mihitsy aza satria tsy zakany ilay hoe...;
« fa Esao no halako, ka nataoko tany lao ny tendrombohiny, ary ny lovany natolotro ho an'ny amboadia* any an-efitra. [Na: jakala] » (Malakia 1:3)
« araka ny voasoratra hoe: Jakoba no tiako, fa Esao no halako (Mal. 1. 2, 3). » (Romana 9:13)
Ka lojika be koa ny iraisan'ireo dia i Abrahama nefa taty aorina dia tsy nitovy intsony...
Inona moa no olana amin'izany? raha manaiky hino an'i Jesosy ireo dia hanaiky ny 3 izay 1...fa raha tsy hanaiky fa hanohitra hatramin'ny farany dia lojika mijanona amin'izay hanany izy izany koa...
rhaj0 - 17/02/2020 17:45
Ilay teny hoe Jehovah anie ry RBNIR ka nogasian'i Andrianaivoravelona avy t@ teny hoe Yahweh na YHWH, izay manondro ilay Iraikalahy ivavahan'ny Jiosy ee... ary io YHWH io dia TSY 3no1, hozy ny tompony, dia ny Jiosy.
Averina indray, i YHWH dia TSY 3no1.
Averina fanin-3, fa i YHWH dia TSY 3no1.
Nefa dia antsointsoin-dRBNIR I Jehovah/YHWH, dia lazainy fa 3no1 koa, nefa...
nefa nofa foana ho'a ee...
Mampalahelo mihintsy anie ny Kristiana gasy, i RBNIR anisany, fa TSY fantany akory IZA io ivavahany io, IZA io tantarain'ny BAiboloy gasy io eee..
Notsimponin'i Andrianaivoravelona ny YHWH, nogasiany ho Jehovah, dia ivavaho HONO io
Notsimponin'i Andrianaivoravelona koa ny Andmntra gasy, ilay vadin'i Zanahary, dia ivavaho koa HONO io
Dia lazain'Andrianaivoravelona fa IRAY daholo ihany HONO ireo.
Dia io nefa izao ao @ Didy Folo, hoe "Aza mivavaka/manana @#$% HAFA".
Ka dia ny mandika an'io Didy io kay izany no ataon-dry Kristiana gasy isan'andro isan'ora.
gasy1zay - 17/02/2020 19:36
Maro ny verset ao @ testamenta taloha izay inoan'ny jodaisma milaza Andriamanitra trinitaire
Ndao isika hanamboatra olona mitovy endrika amintsika...
Andriamanitra nilaza fa hanasoa ny olona avy @ taranak'i Abrahama dia efa nanambara ny Mesia
Ny Fanahin'i Jehovah nitoetra t@ Davida sy ny mpaminany
Ka na tsy mahay ny soratra masina ry zareo raha hilaza fa Andriamanitra dia 1 ihany
rhaj0 - 17/02/2020 21:54
Again... ny "FM-ao-@-Gasy1zay" ve no miteny, sa mba resadresak'i Gasy1zay an-tendron'orona tahak'izany fotsiny io ambony io.
Rahefa mi-gogola mantsy, dia mazava beuh fa TSY miditra velively @ izany 3no1 izany ny Jiosy.
Na dia ilay hoe i Jesosy mitono-tena ho zanak'Andmtnra fotsiny, dia tena nolavin'ny Jiosy sy ny Judaisme marin-drano. Izay indrindra no nampihantona an'i Jesosy t@ lakroa.
K'iinona no hitenenan'i Gasy1zay hoe, jodaisma milaza Andriamanitra trinitaire, izany hoe ilay Zanaka (Jesosy) no ao @ ilay 1??
ny "FM-ao-@-Gasy1zay" ve ho'a no miteny, sa mba resadresak'i Gasy1zay an-tendron'orona tahak'izany fotsiny io ambony io.
RBNIR - 18/02/2020 00:13
Andriamanitra (ilay mandinika ny voa sy ny fo (apok.2:23) mahafantatra tsara hoe Iza marina no tena ivavahan'ilay olona rehefa mivavaka izy...
io tahaka an'ilay vazaha miantso anarana gasy ihany io e! fantatr'ilayolona antsoina tsara hoe izy ange no teneni'ilay vazaha na dia tsy mety aza ny anononany ilay anarana...
Izany tsy midika mihitsy hoe lasa olona hafa indray no nantsoiny....